Voakasik’izany avokoa na ny fampianarana an-tsekoly, Cours, fanofanana isan-karazany na ny fampianarana ankapobeny na ara-teknika ». io no votoatin’ny tenimita laharana 032/MENETEP/SG-DRENETEP Vak/Dir/SP nivoaka ny 7 jolay 2020 ary nanaovana fampahafantarana ho an’ny besinimaro. Noraisina ny fepetra hoy ny fanampim-panazavana « mba ho fiarovana ny zanatsika tsy hitondra, na haka ny valan'aretina COVID 19 » ary « manankery eran'ny faritra Vakinankaratra ny fepetra». Tsy azo atao ny fakana "devoir", na ho an'ny mpianatra na ny ray aman-dreny, fa raha mety dia fifandraisana ara-nomerika no atao, mba hisorohana amin'ny fifampikasohana sy famindrana otrik'aretina. Manentana ny mpianatra ny DRENETEP Vakinankaratra mba tsy hivoaka ny trano, hanaja ny fihibohana, ary hianatra ao antrano eo am-piandrasana ny datim-panadinana omen'ny fanjakana sy ny fotoana hiverenan'ny fampianarana indray.